ASA resin UPVC ophahleni lukathayela ishidi T980 - China Hubei Shengyu zokwakha
Mayelana Zhongbo Group
ANGU ophahleni ishidi
Zu angenisa ukukhanya ophahleni ishidi
Industrial ukufulela ishidi
Residental ukufulela ishidi
UPVC odongeni panel
temperatuer High & ukugqwala ukumelana ophahleni ishidi
Glass fibre kwagcizelela resin ophahleni ishidi RY720-B
ASA UPVC ophahleni lukathayela ishidi W1025
ASA resin UPVC ophahleni lukathayela ishidi T980
Zu daylighting ishidi TT980
UPVC odongeni panel T1110
Zu daylighting ishidi WW1025
Ubuningi Min.Order: 1000meters
Supply Ikhono: 100 000Meters Inyanga ngayinye
Inkokhelo Imigomo: L / CT / T
Fob Inani: 2.99-7.75 / square metres
Shengyu UPVC ophahleni lukathayela ishidi wenza kusuka PVC futhi zokwenziwa resin ASA (Sabic) okuyinto evimbela ezintweni zokwakha uphahla kusuka discoloring. T980 ophahleni ishidi ungukukhanya, okuqinile, ezinzima, weatherable, amelana acid, ama-fungus kanye nomswakama nge izinga abavelele. It uhlala esitebeleni ukusebenza ngokomzimba of -40ºC ukuze 80ºC.it Luhle impahla ophahleni ukuze carport, agcine, isakhiwo umkhakha epaki.
Ubukhulu ububanzi Cover Ububanzi Purlin Space ubude isisindo surface Umbala
2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 980mm 900mm 800mm-1200mm njengoba Kudingeka 4.0-6.0KG / ㎡ ecwebezelayo White, Blue, Gray, ubumba, Red
Abavelele sezulu ukumelana
Njengoba phezulu impahla ungqimba, ASA ubunjiniyela resin kuyinto engavamile ezifanele ukusetshenziswa ongaphandle. Ngisho wadalula ultra-violet ngemisebe, dampness, ukushisa, chillness kanye nomthelela, imikhiqizo ahlale ukuzinza umbala izakhiwo ngokomzimba. Ukuhlolwa owawuse-Aging Test Centre of Arizona futhi Florida ukufakazela ukuthi lingaphansi kuka △ E 5 ingakapheli iminyaka 10.
Shengyu ophahleni plastic ishidi sihamba 6,000h ukuhlolwa ukuguga-China National Test Centre for Chemical zokwakha kanye yi yayo △ E <4.
Shengyu UPVC ophahleni lukathayela ishidi, ukushisa conduction yayo wemfihlo kuyinto 0,325 W / m. K, okuyinto zilingane 1/3 naleso 10mm ukujiya ubumba amashidi, 1/5 naleso 10mm ukujiya usimende amashidi, 1/2000 naleso ukujiya 5mm umbala steel amashidi.
Excellent anti-ukugqwala ukusebenza
Shengyu UPVC ophahleni lukathayela ishidi, ubuso bayo ungqimba (ASA resin) has ukusebenza okukhulu kuhlolo anti-ukugqwala, engeke ukunqabela ngu ukuguguleka imvula neqhwa. ASA resin olumelana amakhemikhali abaningi ezifana acid, ane-alikhali, usawoti, njll Ngakho-ke, kufanelekile isicelo ongaphandle endaweni costal ne sina usawoti inkungu ukugqwala futhi esindayo ukungcola komoya.
Ingaphezulu ophahleni Ishidi aminyene futhi bushelelezi, okuyinto nomphumela ofanayo njengoba amahlamvu lotus. Akukona ukuncela uthuli futhi kalula zingase zihlanzwe yimvula.
Excellent anti-umthwalo ukusebenza
Shengyu UPVC ophahleni lukathayela ishidi has umthamo enamandla eziveza esindayo. Ukuhlolwa, olwenziwa Shanghai kaMasipala Isakhiwo Material Uphiko Quality Ukugada kanye Test Station, kufakazela ukuthi akukho ufa in nesimo 800mm asekelayo span nomthwalo 150kg isicelo.
One piece esezingeni ophahleni ishidi ukala 1.87-6.0kg ngamunye imitha square.
Nge China Isitifiketi Environmental Labelling, lo mkhiqizo kufakazela kungekho ngemisebe, izinto volatilizable nokungcola. Yini ngaphezulu, kungase kube khona kuvuselela kabusha ngokuphelele.
Previous: Zu daylighting ishidi TT980
Okulandelayo: ASA UPVC ophahleni lukathayela ishidi W1025
1.UPVC (ASA), rooing amashidi ziyasetshenziswa ophahleni kuzilandeleli kusuka 8 ° 22 °, ne purlin span akukho kuka 800mm.
T980 ophahleni ishidi ziyasetshenziswa ophahleni kuzilandeleli kusuka 6 ° kuya 22 °, ne purlin span hhayi ningi than 1200mm.
2.Thermal impahla nangokuvikela ayikwazi ukusetshenziswa ngqo ngaphansi ishidi.
Sicela usebenzise iladi noma ezinye izikhungo edingekayo phakathi nokufaka.
Sicela ungami phakathi purlins ezimbili phakathi nokufaka.
Ukuze uthole ophahleni ezinophahla olungunxantathu, amashidi ohlangothini ngalunye kufanele afakwe ngesikhathi esifanayo ne Tile yokhalo.
Ukufakwa is hhayi Kunconywa ukuba kwenziwe izinga lokushisa ngezansi -5 ℃.
Faka ngu roofers professional ukuqinisekisa ikhwalithi ukufakwa.
ukugqagqana ovundlile amagagasi futhi ukugqagqana mpo engengaphansi kwengu-100mm.
I amashidi ukufulela nodonga ambozwe zingalungiswa izingwegwe enikeziwe noma ngezikulufo self-evunyelwe.
Isizathu salokhu siwukuthi yonke ishidi, amasede amabili izingwegwe kufanele zixhunywe kahle kwenye purlin, edabula Crest wave.
Njalo Crest wave endaweni mpo ezedlulayo kufanele eqondiswa purlin ngu izingwegwe, kanye nokuqinisa indlela enhle indlela okufanele zithathwe ezindaweni umoya esindayo.
Ukuze odongeni claddings, le ukweqelana phakathi purlins ezimbili kufanele omiswe izipikili ezimbili.
Rubber ezihlalweni kumele kusetshenziswe ngaphansi ishidi uma ukulungisa by izingwegwe, nati isikulufa kufanele some kahle, hhayi phezu-ezihambisanayo.
6.Roofing amashidi kufanele usike ngu isaha nezisini.
Ukusebenzisa sokuprakthiza kagesi bayamba izimbobo.
Sicela uqiniseke ukuthi amashidi amiswe kahle purlins phambi izimbobo imishini.
I ububanzi imbobo kufanele kube 2mm ebanzi kunalokho of hook mandrel.
Sicela usebenzise PVC glue ukubopha for izimbobo mis-yamba.
I amashidi kufanele agcinwe ebhanoyini esitebeleni, lapho kufanele kube isikhathi eside kunaleso ishidi.
Amashidi emifishane kufanele ufakwe kukho amakhasi amade ukugwema ukusonteka.
Musa beka amaphrofayli ezahlukene amashidi ndawonye.
Sicela ukugcina amashidi emthunzini.
Gwema breaking, bezihlikihla noma ukunwaya kucashile phakathi yokusingatha.
3 Layer Upvc Ro ka Tiles
Carbon Fibre Upvc Roof Ishidi
Sula lukathayela Plastic zophahla AmaSpredishithi
Composite-Asa Camera Upvc Roof Ishidi
Corruagted zophahla Ishidi
Lukathayela fiberglass zophahla
lukathayela Plastic Sula AmaSpredishithi
Lukathayela Plastic zophahla
lukathayela Plastic zophahla AmaSpredishithi Ukuze Abamba Ukushisa
lukathayela PVC Material zophahla Ishidi
Lukathayela PVC Roof Ishidi
Lukathayela Roof Ishidi
lukathayela zophahla AmaSpredishithi
Lukathayela zophahla AmaSpredishithi Sizes
Lukathayela Upvc zophahla AmaSpredishithi
Fibre lukathayela zophahla AmaSpredishithi
Heavy Duty lukathayela Plastic zophahla AmaSpredishithi
Amandla High Upvc Roof Ishidi
Izinto zokuvala umoya Upvc Roof Ishidi
Kerala Sula lukathayela Plastic Roof AmaSpredishithi
Elikhulu lukathayela Plastic AmaSpredishithi
Long span Color Camera lukathayela zophahla Ishidi
Izinhla Multi Upvc zophahla isichuse
Plastic lukathayela Ishidi Inani
Plastic Upvc Roof Ishidi
PVC Futhi Upvc Wave zophahla Amashingili AmaSpredishithi
PVC lukathayela Plastic AmaSpredishithi
PVC lukathayela zophahla
PVC lukathayela zophahla AmaSpredishithi
PVC / Upvc Roof AmaSpredishithi
Material Raw Ukuze lukathayela zophahla Ishidi
Zokwenziwa Resin Upvc Plastic zophahla Ishidi
Trapezoid Upvc zophahla Ishidi
Upvc Plastic zophahla Ishidi
Upvc Roof Ishidi
Upvc Roof Sheetcorrugated zophahla Ishidi
Upvc Roof isichuse
Upvc zophahla Ishidi
Upvc zophahla AmaSpredishithi
Used lukathayela Roof Ishidi
White lukathayela zophahla Ishidi
Ikheli: No.180 Xinglong Rd, Duodao District, Jingmen City, Hubei PR China
Ucingo: (+86) 724-2499177
Whatsapp: Oxhumana ac